Author : मालिकराम राई 'वियोगी'
Published on : November 10, 2008
मालिकराम राई 'वियोगी'
भाग १<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
माधवको प्रथम लेख एउटा पत्रिकामा प्रकाशित भएँपछि उसका आफन्तहरूले उसलाई एउटा लेखक- उनीहरूको सोचाइमा त ऊ कथाकार) नै ठान्न थाले । एउटा कथा संग्रह निक्लेपछि त झन् ऊ ठूलै लेखक भयो, उनीहरूको नजरमा । अनि साथीहरूले, कसैले स्वयं आफ्नो, कसैले अरुको घटनामा आधारित कथा लेख्न उसलाई अनुरोध गर्न थाले । सबैलाई एउटै उत्तर दिने गर्थ्यो ऊ- "कथा भन्ने कुरो त्यसै लेखिदैन । जुनसुकै घटनाले पनि लेखकको अन्तरभावनालाई छोएको हुनुपर्छ, चाहे त्यो सानै घटना नै किन नहोस् । कुनै पनि घटनाप्रति लेखक मानसिकरुपमा प्रभावित हुनैपर्छ । अनि मात्र कुनै विधाको सिर्जना हुन्छ ।"
यद्यपि दिलमानले उसलाई एक दिन भन्यो- "दाइ, मेरो जीवनको घटनाचाहिँ एकदम दुःखदायी छ जसलाई तपाईंले कथामा रुपान्तर गरिदिनै पर्छ । म कुनै दिन तपाईंलाई बताउँला ।" उसले हाँसि दियो । किनकि त्यस्ता घटना सबकोहीसँग हुन्छ । आफ्नो कथालाई सबैले दुःखदायी नै भन्ने गर्छन् । अर्थात ऊ दिलमानको कुरोप्रति त्यति संवेदनशील भएँन ।
फेरि अर्को भेटघाटको क्रममा दिलमानले उसको विगत भन्न थाल्यो,- "दाइ, म र बहिनी हङकङमै जन्मेका हौं । बाबुले हामीलाई लिएर गाउँ निक्लनु भयो । छुट्टी सिध्याइ हङकङ आउनु भयो । त्यसपछि बाबु कहिल्यै घर र्फकनु भएँन । अर्को छुट्टीमा घर निक्लादा बाटोमै उहाँको असामयिक निधन भयो । तथापि बाबुले हाम्रो लागि भनेर गाउामा खेतीपाती निकै किन्नु भएँको थियो जुन सागोलमै -काकाहरूसँग) थियो । उहाँको विचार थियो, आफ्नो कमाइ पनि सबै भाइहरूलाई बराबर होस् । त्यसबेला घरको अवस्था नाजुक थियो जसलाई उहाँ सुधार्न चाहनु हुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले आफ्नो दुई तीन छुट्टीको सम्पूर्ण कमाइ खेतीपाती किन्न र घर जिर्णोद्वारतिर लगाउनु भयो । बाबुको मृत्यु पश्चात काकाहरूमा लोभ, लालच र स्वार्थ बढ्यो । उहाँहरूले आमा, म र बहिनीलाई पाखा लाउन थाल्नु भयो । मानौं, हाम्रो त्यहाँ केही पनि छैन । उहाँहरू त्यहाँको सर्वेसर्वा हुनुभयो । मानौं, उहाँहरू स्वयंको त्यो कमाइ हो जसमा उहाँहरूको मात्र अधिकार छ । उहाँहरू बाबुको मृत्युको क्षतिपूर्ति र अन्तिम पाउादार पनि आमालाई थाहै नदिई अनेकौं तिकडम अपनाएर लिनुभयो, जुन कुरो गाउँले सबैलाई थाहा थियो । वास्तवमा हाम्रो बाबुको सम्पत्तिले उहाँहरूको गाउँमा बोलवाला भयो, एक माना खानसक्ने, धाक, रवाफ, अहम्, घमण्ड देखाउन सक्ने भयो । तर बाबुले त्यति धेरै सम्पत्ति कमाइ दिएर पनि उहाँको परिवार हामीले दुःख मात्र पायौं । हामी काकाकाकीका नोकर सरह भयौं । व्यवहार त नोकरकोभन्दा पनि निच थियो । बिहानको झिसमिसेदेखि रातको बाह्र बजेसम्म आमाले ढिकी-जाँतो, दाउरा-घाँस, मेलापात, खेताला-गोठाला गर्नु हुन्थ्यो, हामी उहाँलाई सघाउँथ्यौं । यति गरेर पनि आमाले कहिल्यै जस पाउनु भएँन, राम्रो लाउन-खान पाउनु भएँन । म र बहिनीलाई सबैले हेंला गर्थे । भाइबहिनीसहितले राम्रो व्यवहार गर्दैनथे । उनीहरू काकाकाकीलाई पोल लाउँथे जसले गर्दा हामीले खप्की खानु पर्थ्यो, अनाहकमा कुटाइ खानु पर्थ्यो । भाइबहिनी साधै स्कुल जान पाउँथे । तर मैले कहिलेकाहीं मात्र स्कुल जान पाउँथें, धेरैजसो घरकै काम गर्नु पर्थ्यो । कहिलेकाहीं स्कुल गएर पनि मैले एस.एल.सी. पास गर्न सकें । तर बहिनीले भने स्कुल नै देख्न पाइन ।"
"अनि तिमीहरूले विरोध गरेनौं ? आफ्नो अधिकारको निम्ति कसैलाई सहयोग मागेनौं ? यस्तो अन्याय-अत्याचार हुँदा गाउँले कसैले सहयोग गरेनन् ? सहोदर भाउजु, भतिजभतिजीलाई त्यस्तो अन्यायमा त नराख्नु पर्ने हो । मलाई त लाग्छ तिमीहरूमा मानसिक भ्रम भयो कि ? किनकि काम त जसले पनि गर्नैपर्छ, खानका लागि, बाँच्नका लागि ।" माधवले यो प्रशनहरू उसलाई तेर्स्यायो ।
"त्यो दुर्गम गाउँमा जसले एक माना खान पुर्याउँछ, उसले गाउँमा छलकपट गर्ने, अन्याय-अत्याचार गर्ने गर्छ । उसैलाई सबैले मान्न थाल्छन् । हाम्रा काकाहरू पनि त्यस्तै भएँ । लोभ, लालचले घरमा अत्याचार गर्थे, गाउँमा अन्याय गर्थे । उनीहरू नै गाउँका सर्वेसर्वा भएँ, प्रधान-पञ्च भएँ, शोषक सामन्ती भएँ । उहाँहरूको सामन्ती व्यवहार झन् झन् बढ्दै गयो । उनीहरूकोसामु कसैले बोल्ने आँटै गर्दैनथे । गाउँलेहरू बरु उनीहरूकै छहारी लाग्थे, चाप्लुसी गर्थे । हामीले केही विरोध त गरेका हौं । तर हाम्रो विरोधलाई त्यतिकै दबाएर राखे । त्यसको बदलामा हामीले अरु सास्ती खानु पर्र्यो । हामी भ्रममा कदापि थिएनौं । सबकोही हामी अन्यायमा परेको स्वीकार्थे । तर कसैले सहयोग र केही गर्न सक्दैनथे । सम्पत्तिले मानिसलाई पापी बनाउँदो रहेछ । सम्पत्तिका कारण आफ्नो सन्तान, आफन्त केही नभन्दा रहेछन्, मानिसहरूले । मानवता, दया, माया र धर्म केही नसम्झिदा रहेछन् । सम्पत्ति र सत्ता एउटै हुँदोरहेछ । सत्ताका कारण सेना र मा��"वादीले मान्छे मारिरहेछन् । राजदरवारमा वीरेन्द्रको बंश नाश भयो । सम्पत्तिका कारण हाम्रा काकाजस्ता धेरै मानिसहरू आफ्नै दाजुभाइ र दाजुभाइका सन्तानलाई अन्याय-अत्याचार गरिरहेका छन् । मारिरहेका छन् । र पनि, हामी नेपाली चूप लागेर बसेका छौं ।"
ऊ बोल्दा बोल्दै माधवले भन्यो,- "ठिकै भन्यौ भाइले । मानिसहरूको नैतिक-पतन दिनानुदिन भइरहेको छ । देशको व्यवस्था र हाम्रो विकृत मानसिकता झन् झन् बिग्रंदो छ । यसमा हामी सचेत र चेतनशील वर्गले सोच्नु पर्ने थियो । देशमा नयाँ व्यवस्था ल्याउनु संघर्षमा उत्रनु पर्ने थियो । तर हामी नेपाली विदेश लागिरहेका छौं । देशको स्थितिलाई भुलिरहेका छौं । अनि भाइ, कसरी हङकङ आयौ त ?"
ऊ बोल्दै गयो,- "हङकङ जन्मिनेहरू धमाधम आउन थालेको खबर हामीले पनि सुन्यौं । जन्मदर्ता किन्न मानिसहरू हाम्रो गाउँसम्म आए । आमा र मैले यता आउने उपाय सोच्न थाल्यौं । उद्धार विचारका मानिसहरूसँग सल्लाह लियौं । जे गरे पनि गाउँबाट त आउन सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले घुम्न जाने बहानामा म मामाघर धरान झरें । मामा र आफन्तहरूको सहयोगले म हङकङ आउन सफल भएँ । एक पटक त काकाहरूले मलाई नपठाएर भाइलाई पठाउने प्रयास गर्दै थिए । तर परिस्थिति प्रतिकुल भइदियो ।"
"भाइको कथाले अलि अलि मनलाई छाम्न खोज्दो रहेछ । केही कष्टकर जीवन भोग्दै आएछौ । अरु केही दुःख थपियो भने एउटा कथा बन्न सक्ला । तर यतिले चाहिँ पाठकको मन तान्न सक्दैन । अब केही भोग्दै जाउ ... ।" माधवले उसलाई यसै भन्यो । जीवनका दुःख, कष्ट के चाहेर आएका हुन् र ? अरू थपिन्छ नै भन्ने के निश्चित ? तर माधवले दिलमानलाई अरू थपिन्दै गयो भने उसको कथा लेखिदिउँला भन्यो । दुःख, कष्ट त कसैबाट दिइएको अन्याय, अत्याचार हो ।
"तपाईंको निम्ति यो सामान्य लागे पनि मेरो लागि ठूलो घटना हो । यस्तो अन्याय-अत्याचार जुन आफ्नै घरमा भएँकोचाहिँ बिरलै पाइन्दो हो । लेखक साहित्यकारहरूको हृदय कोमल हुन्छ, उनीहरू सानै घटनाले भावुक बन्छन् भन्थे तर वाहियात रहेछ भन्ने कुरो तपाईंबाट प्रमाणित हुन्छ ।" उसको कमजोरीमा दिलमानले मज्जाले बजार्र्यो । क्रमश .................